Udliwanondlebe noSol Aguirre, umbhali "Olunye usuku ayilulo usuku lweveki" | Uncwadi lwangoku
Udliwanondlebe noSol Aguirre, umbhali "Womnye umhla ayiloxesha leveki"
I-Actualidad Literatura ikonwabele ukudibana ne USol Aguirre, umbhali "Ngolunye usuku ayilulo usuku lweveki" kunye nomyili webhlogi ehlekisayo "iLas clave de Sol". Lo mfazi use-Barcelona uhlala eMadrid, umthandi webhanyabhanya, iyoga, ukufunda kwaye kunjalo eNew York; Ugqibe kwelokuba awushiye umsebenzi wakhe njengomphathi wentengiso ukuze azicwilise ngokupheleleyo kwinto ayithandayo, ukubhala.
Sol Usicacisela ngokwakhe indlela amava abekho ngayo ukupapasha incwadi yakhe yokuqala, "Ngenye imini ayilulo usuku lweveki."
Iindaba zoncwadi- Upapashe nje incwadi yakho yokuqala kwaye linyathelo elikhulu elo. Khawusichazele kancinci malunga namava okubhala "Ngenye imini ayiloxesha leveki".
Sol Aguirre - usetyenziso lweWindows kwi- Ivenkile yeWindows Ukubhala le noveli kungaphambi nasemva kobomi bam. Ndifunde okuninzi, malunga nam kunye nesenzo sokubhala. Kwakuyindlela ephilisa kakhulu. Ekuphela kwento eyayindikhathaza xa ndibalisa ibali likaSofía Miranda kukwazi indlela yokuhambisa yonke into eyenzeka kuye ngaphakathi enyakeni. Iinyani zilula ukubalisa, into enzima kukubonisa indlela okusichaphazela ngayo ngaphandle kokuyithetha ngokucacileyo, sishiya umfundi ukuba ayifune. Ngoku incwadi sele iivenkile ezithengisa iincwadi iiveki ezimbalwa kwaye ndifumene izimvo ezininzi, kubonakala ngathi ewe, ndiyifumene. Esinjani sona isiqabu!
KWI- Lithetha ntoni uncwadi kuwe? Yintoni eyakukhuthazayo ukuba uqale ukubhala?
SA- Ndihlala ndifunda kakhulu. Ndim kuphela umntwana, ke ndiye ndazibamba ezi ncwadi ukuze ndingadikwa. Ndibhala okoko ndimncinci, esikolweni ndenza amanyathelo am okuqala kukhuphiswano loncwadi. Ke ubomi bundiginyile kwaye, ngethamsanqa, kwiminyaka embalwa edlulileyo ndathatha umdlalo wokubaliswa kwamabali.
KWI- Zeziphi iincwadi onokuthi zishiye ezona mpembelelo kuwe?
SA- "Indlu yemimoya" indenze ndafumanisa umhlaba omtsha. Nayiphi na incwadi ka-Isabel Allende iyandichukumisa iiveki. "Nako oku kuzakudlula" nguMilena Busquets wandichukumisa kakhulu. Umlinganiswa ophambili ngumfazi okule ntanga yam, isiCatalan, unabantwana, nendlela yokwenza neyokuthetha enokuba yeyam… Ndazichonga kakhulu naye.
KWI- Kunye neeurora ezintathu ezikuphawulileyo ...?
SA- UIsabel Allende, uElvira Lindo, uZoe Valdés.
KWI- Ukubuyela kwikhondo lomsebenzi wakho njengombhali, ngela xesha liphi uthathe isigqibo sokushiya yonke into ukuze uzinikele ngokukodwa ekubhaleni?
SA- NgoJanuwari 2016. Enye yeenjongo zam yayikukubhala incwadi kwaye, ngethamsanqa, Inqanaba leencwadi, umshicileli wam, wanditsalela umnxeba emva kweenyanga ezimbini. Ibhlog yam «Las Claves de Sol» ikwafumene ukukhula okumandla kwezo nyanga.
KWI- Yintoni okanye ngubani ophefumlela kuye xa ubhala?
SA- Kwinto eyenzeka kum, ndiyayibona indijikelezile, xa ndincokola nabahlobo bam, xa ndifunda, kuwo nawaphi na amava endincina apha.
KWI- Uninzi lwethu lunokhetho, ukuzonwabisa okanye isithethe xa sihleli phambi kwebhodibhodi. Zeziphi ezakho?
SA- Ndinabantwana ababini, ke iiyure zam zilinganiselwe zezakho. Ndihlala ndivuka kwakusasa, ndifuna ukuthula cwaka, ndizenzela iti emnyama enobisi kwaye ndihlala edesikeni yam. Ngokwesiqhelo ndibhala endisebenza kunye kwaye, ukuba abantwana bahamba noomawokhulu babo, nasekhaya. Ndidla ngokuzoba kakhulu ngosiba ngaphambi kokuziphosa kwikhompyuter. Owu, kwaye ndihlala ndiphethe incwadana yokubhala xa ndibhalela ibhari kwisidlo sakusasa. IiBhari ngumthombo omkhulu wokhuthazo. Ukuya kwam eNew York ukugqiba incwadi, ukuhamba kwam ekuseni ngeCentral Park kwakubalulekile.
KWI- Ngabaphi ababhali osebenzisane nabo okanye ungathanda ukusebenzisana nabani?
SA- Ngaphandle koogxa bam kwibhlog yeWeloversize, andisebenzisanga namntu. Ndingathanda ukuyila into noMariella Villanueva, obhala njengeengelosi.Ndinomdla omkhulu ukwazi ukuba yintoni enokuthi ize nento esiyenzileyo phakathi kwam noMàxim Huerta, ungumbhali omkhulu kwaye ungumhlobo omkhulu. Sibhala ngokwahlukileyo kakhulu kwaye sele uyazi: iipali ezichaseneyo ...
KWI- Masithi le nto iya phambili kwaye bayayilungisa inoveli yakho ukuba ibonakale kumdlalo bhanyabhanya.
SA- UMaribel Verdú.
KWI- Ngokuqinisekileyo abafundi bakho baya kuwuxabisa lo mbuzo: Ngaba unayo iprojekthi ngesandla?
SA- Ndibhala umdlalo noManuel Velasco kwaye ndibhaptizwe kwenye iprojekthi endingenakuthetha ngayo okwangoku. Ndihlala ndibhala kwibhlog yam, ewe, kwaye ehlotyeni ndiza kuqala inoveli yesibini. Okwangoku andicingi ukuba inento yokwenza noSofia, kodwa ngubani owaziyo. Injongo yam kukuba inoveli yam yesibini iphume ngehlobo le2018.
KWI- Uzalisekisile elinye lamaphupha akho, ungamcebisa uthini umntu oqala ukubhala?
SA- Makabhale yonke imihla, nokuba kwenzeka ntoni, nokuba kungangomso kufuneka asuse yonke into. Ufunda ukubhala ngokubhala. Musa ukuba nazintloni, musa ukoyika. Musa ukuzithelekisa nomnye umntu. Ukufumana ilizwi lakho akukho lula, kufuna umsebenzi omninzi.
Ukusuka kwi-Actualidad Literatura sifuna ukubulela ngakumbi ixesha elinikezelwe nguSol kuthi. Ukuba awukabinalo uvuyo lokufunda lo mbhali ungakholelekiyo, ungathandabuzi ukutyelela wqwc.cnkdnmnmnl
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Ezahlukeneyo » Udliwanondlebe noSol Aguirre, umbhali "Womnye umhla ayiloxesha leveki"
Ngubani ongayifundanga i- "Lazarillo de Tormes"?